Epistilin'i Joany - Wikipedia
Ny Epistilin'i Joany, na Epistilin'i Jaona na Epistolan'i Masindahy Joany na Taratasin'i Masindahy Joany dia ireo epistily ao amin'ny Testamenta Vaovao ao amin'ny Baiboly izay lazain'ny lovantsofina fa nosoratan'i Joany (na Jaona). Tamin'ny faramparan'ny taonjato voalohany no nanoratana azy ireo sady tsy fantatra mazava ny olona nanoratra azy. Raha miaraka amin'ny Evanjelin'i Joany (na Filazantsaran'i Jaona) sy ny Apokalipsin'i Joany izy ireo dia mamorona ny atao hoe Literatiora johanika.
Misy telo ny epistily amin'ny anaran'i Joany:
ny Epistily voalohan'i Joany;
ny Epistily faharoan'i Joany;
ny Epistily fahatelon'i Joany.
Isan'ireo atao hoe "Epistily katolika" na "Epistola katolika" na "Taratasy katolika" izy ireo.
Fanoratana[hanova | hanova ny fango]
Ny lovantsofin'ny Fiangonana dia manao ny epistily telo mitondra ny anaran'i Joany ho nosoratan'i Joany Evanjelista. Ankehitriny anefa dia maro ny ady hevitra ny amin'ny fahamarinan'izany lovantsofina izany.
Na dia mitovitovy aza ny fomba fiteny sy fanoratra ary ny teolojia ao amin'ireo epistily telo sy ny evanjely amin'ny anaran'i Joany ireo dia misy ny manampahaizana izay milaza fa ny Evanjelin'i Joany sy ny Epistily voalohan'i Joany dia soratr'i Joany Evanjelista, fa ny Epistily faharoa sy ny Epistily fahatelo kosa dia soratr'olona hafa izay mety ho ilay "Loholona" (na "Antidahy"), atao hoe Joany (na Jaona) koa, resahina ao amin'ny Epistily faharoa (2Joa. 1.1) sy ao amin'ny Epistily fahatelo (3Joa. 1.1). Ny mpanampahaizana hafa koa dia mihevitra fa soratr'olon-tokana ireo, izay mety ho i Joany Antidahy (na Jaona Loholona), fa tsy i Joany Evanjelista. Ny hafa indray dia mihevitra fa ny Epistily voalohany sy faharoa dia soratr'olona iray fa ny Epistily fahatelo soratr'olona hafa. Ny ankamaroan'ny mpikaroka anefa dia mihevitra fa ilay Joany Antidahy no nanoratra ireo epistily telo ireo sy ny Evanjelin'i Joany.
Joany na Jaona
↑ Voambolana: "loholona" ny ao amin'ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy.
↑ Voambolana: "Antidahy" ny ao amin'ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistilin%27i_Joany&oldid=972801"
Voaova farany tamin'ny 30 Jolay 2019 amin'ny 11:01 ity pejy ity.